प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई भीखारीमुक्त देश बनाउने उद्घोष गरेका छन् । यही असोज १३ गते खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्न आयोजित लाजमर्दो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को उदेक लाग्दो उद्घोष गरेका हुन् । उनले खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरे पनि मुलुकमा त्यस्तो अवस्था छैन । राजधानी उपत्यकामा त सार्वजनिक सौचालयहरु छैनन् भने गाउँठाउँ, भीर, पखेरामा त्यस्तो सुविधा हुने कुरै भएन ।
पूर्वाधारबिना नै दक्षिण एसियामै पहिलो हुनका लागि मात्रै भए पनि खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको हो भने त्यो पनि बौलठ्ठीपूर्ण नै मान्नु पर्दछ । होइन भने अहिले हाम्रोजस्तो गरिब, पूर्वाधारबिनाको देश खुला दिसामुक्त हुनै सक्दैन । गोठालो जाँदा वा घाँस दाउरा गर्न वन जाँदा अथवा मेलापात जाँदा होस् वा बाटोमा मात्रा गर्दा नै किन नहोस् सार्वजनिक सौचालय नभएकाले सबैले खुला ठाउँमै सौच गर्नु परम्परा छ । त्यस्तो विकराल यथार्थ हुँदा हुँदै त्यसलाई देखेको नदेख्यै गरेर मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नु क्रुर मजाकबाहेक केही होइन । त्यसमाथि पनि सोही कार्यक्रममा मुलुकलाई माग्नेमुक्त बनाउने उद्घोष गर्नु अर्को उदेक लाग्दो कुरा हो ।
हाम्रो देशमा संसदीय प्रजातन्त्र छ । दलहरु चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्छन् । राजनीतिक दलले उम्मेदवार तोक्छन् । उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा होमिन्छन् । त्यसका लागि पैसा खर्च हुन्छ । रकम खर्च नगरी कार्यकर्ता परिचालन हुँदैन । उम्मेदवार उठाउने दलको नियमित आम्दानीको ठोस् स्रोत छैन । निर्वाचन आयोगले अरु देशमा जस्तो दललाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि छैन । उम्मेदवारले नै आप्mनो खर्च आफैँ जुटाउनु पर्दछ । उसले चुनावी खर्च आफ्नै पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर गर्दैन । उसले सबै खर्च साहुमहाजन, उद्यमी व्यापारी, देशी विदेशी माफिया जोसँग जति पायो, रकम मागे र खर्च गर्दछन् ।
माग्ने मुक्त बनाउने घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले त्यस्तै विदास्पद व्यापारीहरुसँग रकम मागेर केही समय अघि सिंगापुर गएर आफ्नो उपचार गरेर आएको कुरा बिर्सन सकिँदैन । किनकि सरकारले उनको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको छ र उनले त्यो खर्चको स्रोत अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । तर उनैले यो देशलाई माग्नेमुक्त बनाउँछु भनेर कसरी मुक्त हुन्छ ? त्यो मुक्त हुन् पहिला प्रधानमन्त्री माग्ने हुनु भएन, सरकारले विदेशीसँग भीख मागेझैँ मागेर देश चलाउनु भएन, मन्त्रीहरुले ठेकेदारसँग कमीशन माग्न छाड्नु प-यो, उम्मेदवारले माफियासँग पैसा मागेर चुनाव लड्नु भएन । नत्र कसरी मुलुकलाई भिखारीमुक्त भन्न सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले जनउत्तरदायी बन्न सिक्नु प-यो, जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने वानी छाड्नु प¥यो । उनी यसरी चिया गफका खिसिट्यौरीको पात्र बनेर प्रस्तुत हुनु भएन । यहाँ सडकमा बसेर माग्ने पनि छन्, टाइसुट लगाएर माग्ने पनि छन् । मठमन्दिरअगाडि बसेर माग्ने पनि छन् । घरघरमा गएर माग्ने छन् तर ती सबै माग्ने नै हुन् । तीमध्येको भीखारी हुन् र को होइनन्, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले नै छुट्याइदिनुपर्ने हुन्छ अब ।